UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့တွင်လူငယ် ၂ဝ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့တွင်လူငယ် ၂ဝ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့တွင်လူငယ် ၂ဝ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
Posted by ကို သာ on Aug 3, 2012 in Myanma News | 13 comments
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားအား ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၊ မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်အနီးရှိ UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့တွင်လူငယ် ၂ဝ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာအရေးပြောကြားသော မိန့်ခွန်းအား ထောက်ခံခြင်း၊ UNHCR မဟာမင်းကြီးပြောကြားသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မည့် အကြောင်းအား ကန့်ကွက်ရှုတ်ရှခြင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများအား မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟု ဖိအားပေးပြောဆိုနေကြသော ပြည်ပမီဒီယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံများအား ရှုတ်ရှဆန့်ကျင်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၊ မြန်မာပြည်သူတိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးက ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ညီညီညွှတ်ညွတ်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် ၎င်းတို့က တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ““ရိုဟင်ဂျာအရေးပြောကြားသော သမ္မတကြီးအား ထောက်ခံပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်။ လိမ်ညာဝါဒဖြန့် မီဒီယာများချက်ချင်းရပ်။ ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားဟု ပြောသူများ အလိုမရှိ””ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့မှာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်ခံမှမဟုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စုစည်းမိသော လူငယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref;7Days News
လုပ်သင့်ပါတယ် …. ဒါမှတနိုင်ငံလုံးဆန္ဒ ဒင်းတို့သိမှာ….
ကဲ … ဒို့လဲ စလိုက်ကြရအောင်
ဩစီက အဘဆိုတဲ့လူကြီး ဒါမျိုးဆိုရင်ငြိမ်နေမယ်၊။
အဲဒီလိုပွဲမျိုး ကိုယ်တိုင်ဝင်နွဲလိုက်ချင်တယ်ကွာ ….
cobra ရေ …. ကျန်ဘတ်စ်ကားစီးရင်း ဆန္ဒပြသွားတဲ့ လူတွေကိုပါ ထည့်ရေထားတာဖြစ်မယ် … ဟိ
လူတွေဆူတာလည်း မပြောနဲ့လေ … အကြောင်းရှိတယ် … အစ်မတို့ တိုင်းပြည်မှာကလေ … မတရားတာ ၊ မကျေနပ်တာကို ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ …အမှန်တိုင်းဖြစ်လာတာမျိုးက … မရှိသလောက်နည်းတယ်လေ … ဒီလို လူသိအောင် ၊ မီဒီယာသိအောင် လုပ်မှသာ …သတိထားမိပြီး …. အမှန်တရားအတိုင်း ….ဖြစ်တတ်တာမျိုးဆိုတော့ …ဆန္ဒပြမှုကို မရွေးချင်ပဲ ရွေးကြရရှာတာပါ … ဒါပေမယ့်လည်း ..ဆူပူမှု အသွင်တော့ မဆောင်ပါဘူး … သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ရုံလောက်ပါ … ။
ကျွန်တော်တို ့ဂေဇက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတွေလဲ ၊ ပြဿနာစဖြစ်ကတဲက ဆန် ့ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗျား..
“““ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂ ါလီ ဖြစ်ဖြစ် ဘာကုလားဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ လုံးဝ အလိုမရှိ ”””
“““ လူလူချင်းမြိုမယ်ဆိုတဲ့ အင်မတန် အောက်တန်းကျတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေအား ဆန် ့ကြပါတယ်ဗျို ့”””
ထောက်ခံတယ် ၊ ကျနော်တို့လို လေပွနေတဲ့သူတွေထက်စာရင် သူတို့ကမှ
သူရဲကောင်းတွေပါ ၊ ဂုဏ်ပြုပါတယ် ၊။
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလုပ်တဲ့ လူ ၂ဝ လုံးကို လက်ခုပ်တီး၍ အားပေးပါတယ်ဗျို့။